Gears of Wars ဂီတစစ်ပွဲအတွင်း Funko Pop ကို ၀ တ်ဆင်သည်။ | Androidsis
သင် Gears POP နှင့်အတူ Gears of War ၏အပြောင်ပြတ်ဆုံး version ကိုမှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။
Si Gears of War ကိုတတိယပုဂ္ဂိုလ်သေနတ်သမားအဖြစ်အမြဲသတ်မှတ်သည် အလွန်လေးနက်ပြီးလက်တွေ့ကျသောထိတွေ့မှုဖြင့် Gears POP! မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက်မူကွဲပြားခြားနားသောအရာဖြစ်လိမ့်မည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ID Software ဂိမ်း၏အဓိကဇာတ်ကောင်များသည်ချစ်စရာလေးအရုပ်ဖြစ်လာမည်။
ဒီကနေရရှိနိုင်ပါပြီ ယခင် Gears POP မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည် Funko Pop အရေပြားနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း အထူးသဖြင့်အနုပညာရှင်တွေ၊ သရုပ်ဆောင်တွေ၊ တီဗွီတွေ၊
Tus Gears of War ကနေအကြိုက်ဆုံးသူရဲကောင်းများနှင့်လူကြမ်းများ Gears Pop လို့ခေါ်တဲ့ Sking Funko Pop နဲ့ကစားသမားတွေကို Gears of War ဇာတ်ကောင် ၃၀ အထိစုဆောင်းပြီးအဆင့်မြှင့်နိုင်တဲ့ကစားသမားဂိမ်းတစ်ခုနဲ့ကြိုတင်စာရင်းသွင်းနိုင်ပါပြီ။
Gears of War မှ Funko Pop ကိန်းဂဏန်းများတွင်တွေ့နိုင်သောကိန်းဂဏန်းများကိုဖတ်နိုင်သည့်ကဒ်များမှတဆင့်ဂိမ်းထဲသို့ဇာတ်ကောင်အသစ်များကိုပင်သင်ထည့်နိုင်သည်။ ငါတို့ပြောတယ် အခြားကစားသမားများနှင့်ဆန့်ကျင်သောအချိန်တွင် multiplayer online game တစ်ခုရှိသည် ထို့အပြင်ကလပ်အသင်းများထပ်မံကစားခြင်းတွင်ကစားသမားတစ် ဦး သည်ထိုနည်းစနစ်ကိုမပျောက်ဆုံးစေဘဲသင့်အားပျော်ရွှင်စေသည်။
တစ်နည်းဆိုရသော် Gears of War သည် Funko Pop ဖြစ်သည် အခြား gacha freemium y အဆိုးဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်ခြင်းသောသူတို့ကိုလုယက်သေတ္တာများ များစွာသောအိပ်မက်ဆိုး ငွေရှာခြင်းကိုသာသိရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည် "အနိုင်ရရန်ပေးဆပ်မှု" ဖြစ်လာနိုင်လျှင်သို့မဟုတ်မိုက်ခရိုငွေပေးချေခြင်းသည်အလှကုန်အကြောင်းပြချက်များကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါတို့သစ်သားကိုထိပေမဲ့၊ ဒါကနောက်တစ်ခုအတွက်မျှော်လင့်ပါတယ်။
Gears POP! Microsoft ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်အတူလက်၌လက် အောက်ဖော်ပြပါလင့်ခ်မှသင်ယခင်ကမှတ်ပုံတင်ပြီးသည့်အခါသင့်ဖုန်းသို့ရောက်သောအကြောင်းကြားစာတစ်ခုမှရနိုင်သည်။ ဒီ Gear of War ခေါင်းစဉ်အသစ်ဆိုတာဘာလဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » သင် Gears POP နှင့်အတူ Gears of War ၏အပြောင်ပြတ်ဆုံး version ကိုမှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။
ဤသည်မှာ Android အတွက်နောက်ထပ် Bethesda ဂိမ်းဖြစ်သည်။ Commander Keen ပြန်လာသည်
ဤသည် Oppo ၏မမြင်ရသောမျက်နှာပြင်ကင်မရာနည်းပညာ၏တိုးတက်မှုဖြစ်သည်